Archdiocese of Mandalay blog: အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးဝါဒ (တနည်း) ဣတ္ထိယ၀ါဒ ပင်မရေစီးနဲ့ ၀ိရောဓိများ
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးဝါဒ (တနည်း) ဣတ္ထိယ၀ါဒ ပင်မရေစီးနဲ့ ၀ိရောဓိများ
ဣတ္ထိယ၀ါဒီလို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဝါဒီ လှုပ်ရှားမှုဟာ အမေရိကပြည်မှာ အကြီး အကျယ်အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကျောင်းများမှာ၊ တရားဥပဒေမှာ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ၊ အလုပ်ခွင်တွေမှာ ခွဲ ခြားဆက်ဆံ ခံရတာတွေကို နိဂုံး ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမေရိကန် အမျိုးသမီးတွေ ကတော့ ဒီ လောက်ထိ ခရီးပေါက်ခဲ့ကြပြီလို့ မယူဆသေးပါဘူးရှင် . . . .
“စည်းခွဲထားသည့် ညီအစ်မများ”လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ပညာရပ်မှာ ဘွဲ့လွန် ရထားတဲ့ ၀မ်းဆွဲ ဆရာမ လာဗွန်နီဝီလ်ကင်က “ရှင် ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာရင်တော့ ဣတ္ထိယ၀ါဒီတွေက ရှင့်နောက်မှာ မားမား ရပ်မှာပေါ့” လို့ ပြောခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရသလဲ ဆိုရင် “သာမန် မိန်းမသားတွေ အတွက် သူတို့ လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာ တကယ့်ကို နည်းလွန်းတဲ့ အတွက် ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဣတ္ထိယ၀ါဒီ လှုပ်ရှားမှုဟာ သူရဲ့ အခြေခံမှုကို မချဲ့ ထွင်သေးကြောင်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့မှာ အများစုက လူဖြူ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေကြောင်းဖော်ပြတဲ့ အပြင် သူတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း တလွဲဆံပင် ကောင်းသလိုဖြစ်နေကြပါတယ် . . . ဥပမာ-ကလေးငယ် တွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ထက် ယောက်ျားလျာတွေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုခြင်း၊ စီးပွားရေး ရှင်သန်ရေးထက် နိုင်ငံရေးမှာ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိအောင် လုံးပန်းနေကြခြင်းနဲ့ ဆင်းရဲသား နင်းပြားတွေကို ကြည့်ရှုရမယ့် အစား လူချမ်းသာတွေ အတွက်ပဲ ဆောင်ရွက်ရခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် . . . အမေရိကန်မှာ အမျိုးသမီးတွေ တိုးတက်မှုမှာ ညီမျှမှု မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ် . . . ဆေးသိပ္ပံကျောင်းမှာ သင်တန်းသားဦးရေရဲ့ ၄၀%က မိန်းမတွေဖြစ်ပြီး ဥပဒေပညာရပ်မှာတော့တစ်ဝက်အထိ ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ် . . . တခြား နယ်ပယ်မှာလည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ ရှေ့တန်းကို ရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ် . . . ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ယောက်ျားသားတွေနဲ့ မတူကြောင်း အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပေမယ့် လေ့ကျင့် သင်ကြားမှုမရှိ ကြောင်း၊ ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ အသိပညာကို အခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ သူတို့ရဲ့ ဘွဲ့လွန် ဒီဂရီတွေဟာ အချည်းနှီးဖြစ်ရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးအများစုဟာ အတွင်းရေးမှူး၊ ကျောင်းဆရာမ၊ ငွေကိုင်နဲ့ သူနာပြု အပါအ၀င် အမျိုးသမီးများရဲ့ အစဉ်အလာ လုပ်ငန်းများတွေမှာပဲ တ၀ဲ လည်လည် ကျင်လည်နေရရှာပါတယ်။ အမေရိကန် အလုပ်သမား စာရင်း ဇယားဌာန အဆိုအရ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား အားလုံးရဲ့ ၂၁%ဟာ လခနည်းတဲ့လုပ်ငန်း ၆မျိုးမှာ လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း သိရှိရပါတယ် . . .
“ယောက်ျားတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မိန်းမတွေရတဲ့ငွေကြေးဟာ သိပ်နည်းလွန်းတယ် . . . ဒါရဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ မိန်းမတွေနဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ လုပ်တဲ့ အလုပ်ချင်း မတူကြလို့ပဲ” လို့ အယ်လင်အရာမိုက ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အယ်လင်ဟာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီးအ သင်း အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ လခတန်းတူ ညီမျှရရှိရေးကို အထူး ဦးစားပေးအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းအ တော်ကြာတောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။ အကျိုးဆက် အ နေနဲ့ အလုပ်သမားဌာန စာရင်းဇယားများ အရ အမျိုးသားများရရှိတဲ့ လခရဲ့ ၇၁% ရရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်. . .
ဆင်းရဲမွဲတေမှုဟာ မိန်းမတွေမှာ ယောက်ျား တွေထက် ပိုဆိုးကြောင်း၊ ၀ါရှင်တန်မြို့တော် အခြေစိုက် အမျိုးသမီးများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အရ အိမ်ထောင်စုကို တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည် ရုန်းကန်နေရတဲ့ မိခင် ငါးဦးမှာ သုံးဦးက ဆင်းရဲ မွဲတေနေ ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ အဲဒီလို မိခင် အရေအတွက်က ၁၉၈၀ မှာ ၅.၈သန်း ရှိခဲ့တာကနေ ၁၉၉၀ မှာ ၇.၇သန်း တိုးလာပြီး သူတို့ရဲ့ အလယ်အလတ် တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၉.၃၅၃ဒေါ်လာပဲ ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
စီးပွားရေး အခြေအနေအရ အမျိုးသမီးအများ အပြားဟာ အိမ်ပြင် ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့ မိခင်တွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အစီအစဉ်မှာတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေထက် နောက်ကျ ကျန်ရစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အမျိုးသမီးအုပ်စုတွေဟာ အမေရိကန် ဣတ္ထိယ၀ါဒလှုပ်ရှားမှု “စတုတ္ထမြောက်လှိုင်းသစ်ကို ဆင်နွှဲနေကြောင်း နဲ့ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ သမ္မတကတော် ဟီလာရီရော့ဒဟန် ကလင်တန်ကနေ စပြီး ဆင်းရဲတွင်းထဲ ကျနေတဲ့ အမျိုး သမီးတွေ အထိ ပါဝင်ကြတယ်ဆိုတာလည်း သိရှိရပါတယ်။
ကမ္ဘာနဲ့ အ၀ှမ်းမှာ နိုင်ငံတကာ ဣတ္ထိယ၀ါဒီ လှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်များများ ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် အမျိုးသမီး ညီလာခံမှာ ဆုံးဖြတ်ကြမယ့် အမျိုးသမီး ရပိုင်ခွင့်တွေဟာ တောင်းဆိုချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိ မရှိဆိုတာကို ဆက်လက် နားစွင့်ရင်း ပြင်ဆင်မှု အပိုင်းတွေ ပြုလုပ်နေကြတဲ့ အထဲက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ သတင်းစကားလေးနဲ့ အတူ ကက်သလစ် အသင်းတော် အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ကာသိုလိပ် အသင်းတော်အနေနဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံမှု ရှိ ကြောင်း အကယ်၍ အသင်းတော်အနေနဲ့ ၎င်းင်းအချက်ကို အမြဲတမ်း ရပ်တည်မှု မရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါ ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ဂျွန်ပေါလ်က မိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ် အမျိုးသမီးများရဲ့ တန်းတူညီမျှရှိရေးဟာ ကြီးမားတဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အောင်မြင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်း ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီးက ဆက်ပြီး မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ပီကင်းမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အမျိုးသမီး ညီလာခံမှာ အသင်းတော် အ နေနဲ့ ထူးခြား ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူညီမျှရှိသည်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သဘော ပေါက် လက်ခံထားသည်ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်ကြောင်း တင် ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 1:30 AM